शक्ति'शाली मन्दिर जहाँ जे मागे नि पूरा हुने बिश्वास गरिन्छ ! सबैले शे*यर गर्नुहोस् - सुदुर नेपाल
शक्ति’शाली मन्दिर जहाँ जे मागे नि पूरा हुने बिश्वास गरिन्छ ! सबैले शे*यर गर्नुहोस्
काठमाडौं । ठुलो केदार नेपालको डोटी जिल्लामा अवस्थित एक मन्दिर हो । यो मन्दिरलाई सुदूर पश्चिमकै प्रख्यात मन्दिर मनिन्छ । ठुलो केदारलाई गौतम गोत्रिय चन्दहरूले कुल देवताको रुपमा पूजा गर्दछन् । यो मन्दिर डोटी बोगटानमान्ना कापडी गाउँ विकास समितिको पूर्वउत्तर, धिर्कमाण्डौ र सातफेरी गाउँ विकास समितिको दक्षिण,लाना केदारेश्वर गाउँ विकास समितिको उत्तर र सिमचौर गाउँ विकास समितिको उत्तरवाट पश्चिमको शिखरगरी पाँच गाउँ विकास समितिको बीचमा पर्ने २८९१ मिटरको अग्लो केदारेश्वर लेकमा भगवान ठूलाकेदार विराजमान रहेकाछन् ।
यो क्षेत्र उपल्लो वोगटानमा पर्दछ । डोटी जिल्लामा केदारका मन्दिर माडौं पौराणीककाल देखिनै प्रत्येक स्थानमा रहेको मान्यता छ । यी सबैको मूलस्थान ठूला केदारलाई मानिन्छ । डोटी वोगटान लानाकेदारेश्वरको उत्तरको लेकको पहरोको चुचुरोमा केदारको शिला रहेको छ । यो शिला दुई ठूला ढुङ्गाको बीचमा अलि समथर स्थानमा छ । ब्राह्मणहरुले यसगाथमा उक्लने सिडीभन्दा तल दुई ढुङ्गाको बीचमा बाटोको वरपर वडारमा बसेर केदारको पाठपूजा गर्ने गर्दछन् । यस जात्राको देउरामा आएका चोखा जातका धामी मात्र गाथमा गएर नाँच्ने गर्दछन् ।
अन्य जातका मानिसहरु अर्को एउटा ठूलो ढुङ्गा माथिमा गएर नाँच्ने गर्दछन् । यिनै केदारका पुत्र कार्तिकेय मोहन्याल मानिन्छन् । यी मोहन्याल आफ्ना बाबुका मूल जन्मेका थिए र केदारले तामाको ढोलमा हालेर गाड वगाएको भन्ने पौराणीक भनाई यहाँ पनि छ । यसै अनुसार यसकोतल केदार्नीमाडौ र मोहन्याल बगाएको स्थान भनेर बताईने गरिन्छ । तल्लो वोगटानमा मोहन्याल केदारनाथले मन्दाकिनीमा बगाएको किंवदन्ती रहेको छ ।तल्लो बोगटानमा रहेको मोहन्याल ल्याउँन वडातडो देवता कुमाऊँ गढवालको कत्यूर गएको भनाई खापरेसँगको युद्ध हुँदाको लोक आख्यानले पनि सही भएको पुष्टि गर्दछ । केदारलाई खापरेले झेल हालेको समयमा मोहन्याल र खापरे बीचको युद्ध भएको समयको भनाई यसप्रकार छ ।
यसपछि खपरे सेतीमा डुब्दै रुदै भागेर गयो । त्यहाँ बाट खप्तडमा गई माडौसजायर बस्यो । यस प्रकारको फाग वोगटानमा छ । मोहन्याल आफ्ना बाबु केदारका मूलजन्मेका कारण माथि केदारको गाथमा गएर ना“च्दैनन् । यिनै केदारलाई खापरे राक्षेसबाट मोहन्यालले आफ्ना दल र वलका सहयोगले युद्ध गरेर वचाएको किंवदन्ती छ । केदारको पूजामा गाईको दूध ९मथाउत० चढाउने परम्परा रहेको छ ।पूजाको दिनमा साजी विहान दुहेको दूध मथाउतका रुपमा घरबाट हिँड्दा हिँड्दै मन्दिरमा नपुग्ने र दूध दहीमा परिणत हुने भएका कारण अथवा अति दूरीका कारण यिनै केदारले त्यस ठाउँको एक मुठ्ठी माटो लगेर श्रद्धा भक्ति र आस्था पूर्वक जसले जस ठाउँमा स्थापना गरेको छ । त्यही पूजा आराधाना गर्नु भन्ने आदेश अनुसार अन्य ठाउँमा पनि केदारको रुपमा यिनै केदारलाई पूज्ने कार्य भएको मान्यता छ ।
चाकाकेदार र यस ठूलोकेदारमा कार्तिक शुक्लपक्ष त्रियोदशी ठूलो जाँत जात्रा र वैकुण्ठ चर्तुदशीका दिनमा विशेष पूजा हुन्छ । यस दिन यस अन्तरगतका विभिन्न देवताको देउरो आउँछ । केदारको जात्रालाई ठूलो धार्मिक पर्व मान्ने गरिन्छ । यस ठाउँमा एक पटक आएको मान्छेले अर्को पटक अनिवार्य आउनु पर्ने हुन्छ । पापीहरु केदारको स्थापना भएको ठाउँदेखि तल वाटोमा रहेको गौडो उक्लन सक्दैनन् ।यहाँ आएकाहरु केदारको आर्शिवाद र प्रसाद लिएर जान्छन् । यहाँ नयाँ आएकाहरु यस ठाउँको देवताहरुको लिला देखेर निकै रमाईलो महशुस गर्दछन् । यो स्थानलाई तीर्थस्थल मान्ने गरिन्छ । केदारका पूजारी उपमन्यु गोत्रीय विनाडी थरका ब्राह्मण रहेका छन् । ठकुरीहरुमा बैतडी बाट पूर्व आएर बसेका भानादेवको सन्तानका झापर देउका वंशज मानिने गौतम गोत्रीय ,चन्द्रवंशी प्रतिहार चन्द ठकुरीहरुले केदारको जाँतमा अनिवार्य जानु पर्ने हुन्छ ।
ठूला केदार र मोहन्यालको सम्बन्ध :
साङौडी,सौडीरसौटी देवता :
सौटी सहितकाको देउरो आउँछ । मेलघट्टी र जैनाडी मोहन्यालकी वहिनी भएका कारण मोहन्याल यिनका टाउकामा तेल हालिदिन्छन् कपालकोरी दिन्छन् । मोहन्याल २ वटा छन् । डोटी केदार र त्यहाको केदार्नीबाट पनि मोहन्यालको जन्म भएको मान्यता छ । ती मोहन्याल लाना केदारमा छन् । तल्लो बोगटान९कत्युरी नरेश को मोहन्यालको पनि यहाँको केदारमा ठुलो सम्मान हुन्छ । डोटी तल्लो बोगटानका मोहन्याल कुमाऊ गडवालका केद्रनाथबाट उत्पति भएका हुन् । हाम्रो यस क्षेत्रदेखि जुम्लासम्म बीच बीचमा केदार प्रवेश गरेका छन् । अछाम र डोटीको चौखुट्टेसम्म केदारको र उता खापरेको क्षेत्र हो ।
ठूला केदारको दर्शन र अन्य जानकारी सम्बन्ध :
राजादिलिप र रामचन्द्रले पनि यस क्षेत्रमा घुमफेर गरेका थिए । केदारमा कुन्ती महारानी ५ दिनसम्म बसिन त्यहाँ पानी देखिनन् । त्यसैले केदारनाथबाट पानी मागेर छोडी गईन् । आज यो पानी केदारको जाँतमा देवता पूज्ने र खाने भएको छ । भगवान रामचन्द्रले यस केदारका ज्योतिलिङ्गको दर्शन गरेका थिए । यहाँबाट रामचन्द्र रामेश्वर गएका हुन् । यी केदारका ११ औ ज्योतिलिङ्ग मानिन्छन् । हामीले यसको विकास जुनरुपमा गर्नु पर्नेहो त्यो रुपमा गर्न सकेकाछैनौ ।
यहाँ केदारका पाउ खुट्टा को पूजा गर्ने गरिन्छ ।
काठमाण्डौको पशुपति शिवको “टाउको” हुन् । कुमाऊँ गढवालका केदारनाथ शिवको “ढाँड” हुन् । ठूला केदारमा केदारपक्ष र खापरेपक्षकाहरुको युद्ध गर्दाको रमिता लानाकेदारेश्वरको “गाथ” रहेको स्थानदेखि माथि उत्तर तर्फ केही समथर ठाउँ छ । यस समथर ठाउँमा केदारको जाँत भएको राती डेउडा खेल्छन् । देवताहरुको वयाँल देउरो यसै स्थानको उत्तरपूर्व र पश्चिम दक्षिण तिर रहेको बाटोबाट आउने गर्दछ ।
यहाँ खापरेपक्ष मानिने उपल्लो पूर्सिल गर्खाकाहरुले आप्नो ठाउँबाट काठ ल्याएर खापरे मुसेको माडौ बनाउने र तल्लो पूर्सिल गर्षाको “दवातल सौडी” ले देख्ने वितिकै भत्काई फालिदिने प्रचलन रहेको छ । यदि दवातल सौडी आएन भने त्यो खापरे माडौ केदार अन्तरगतका अन्य देवताले भत्काई फाल्नु पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा यस स्थानमा युद्ध भएको भान पारि केही समय अनौठो दृश्य देखिन्छ ।पहिलेका दिनमा बनाउने र भत्काउनेका बीचमा लठ्ठी हाना–हान कट्याङ्ग, कुटुङ्ग गर्ने गरिन्थ्यो । खापरेपक्ष आउँदा एक छिन् जोरतोड हुने गर्दथ्यो भने आजभोलि त्यस्तो गरिदैन । तर खापरमाडौ जसलाई स्थानिय स्तरमा मुसे९खापरे० माडौ भनिन्छ त्यो बनाउने फुर्सिलाहरुले खापरेको माडौ त्यहाँ बनाए पछि तिनीहरुलाई सुःख शान्ति र राम्रो हुने भएका कारण त्यस्तो गर्दछन् भने केदारको स्थानमा खापरेको स्थापना गरिए वैदिक देवगणकाहरुलाई नराम्रो हुने भएका कारण केदार पक्षकाहरु भत्काउने र फालिदिन्छन् ।
मुसे माडौ :
कहाँ कहाँ बाट आउँछन यहाँ मेला भर्न :
यस केदारको मेलामा लानाकेदारेश्वर तथा धिर्कामाण्डौ गा०वि०स० का मानिसहरु देवताको करले तथा रमाईलोको लागि पनि आउने गर्छन । किन भने बिशेष गरी यी दुई गा०वि०स० बाट देवताको देउरो आउछ । बाँकी केदारको वरिपरि रहेका गा०वि०स० हरु क्रमश सिमचौर केदारअखडा कानाचौर चवाराचौतारा सातफरी मान्नाकापडी बर्छैन निरौली गा०वि०स० का मानिसहरु धेरै जसो आउने गर्छन ।श्री केदार बाबाले मनोकामना पूरा गरिदिन्छन भन्ने जनिबश्वासका कारणले यहाँ धेरै टाढा बाट समेत निष्ठा काष्ठाका साथ भगवान शिवजीको नामले ब्रत गरी केदारबो द्शन गर्न आउने गर्दछन । अझै उल्लेख्य पक्ष त के छ भने नजिकको तिर्थ हेला भनेझैँ यो मन्दिर आसपासका भन्दा टाढा बाट श्रद्धा र भक्तिभावका साथ आउने मानिसहरुको मनोकाँक्षा पूरा हुने गरेको पाईन्छ ।
Previous Post: थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण
Next Post: श्र’द्धा’सुमन !आज मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २७ औँ स्मृति दिवस